Ciidamada Al Shabaab oo Gaadiid Dagaal Ka Qabsaday Dowladda Federaalka iyo Taliye Sare oo Ladilay.
Wednesday January 07, 2015 - 18:15:58 in Wararka by Super Admin
Ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa duleedka degmada W/weyn ee shabeelaha Hoose ku dilay sarkaal sare oo katirsanaa melleteriga dowladda Federaalka.
Kadib dagaal culus oo dhaxmaray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka DF-ka ayay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen gaari nuuca Cabdi bilaha loo yaqaan oo uu ku xirnaa qori dhashiike ah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka lagu dilay 6 askari iyo taliye sare oo lagu magacaabi jiray Col.Baakaati,sarkaal katirsan xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa warbaahinta islaamiga ah u xaqiijiyay in ciidankoodu ay qabsadeen gaari Cabdi bile ah islamarkaana ay dileen 7 askari oo kamid kamida ahaa sarkaal.
Warar madax banaan oo SomaliMeMo ay heshay ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay wadada ugaleen sedax gaari Tikniko ah oo ku daba jiray gaari dagaal oo uu ku xirnaa qoriga 37 kaasi oo maanta barqadii kasoo goostay W/weyne kuna biiray ciidamada Mujaahidiinta.
Sidoo kale xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay xaqiijisay in dhankeeda ay iskusoo dhiibeen ciidamo DF-ka katirsan oo watay gaari dagaal.
Deegaan dhaca duleedka W/wyen ayaa maanta gelinkii dambe lagusoo bandhigay hubka iyo gaadiidka dhanka DF-ka laga helay oo midna isdhiibay midna dagaal lagu qabsaday.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidan ka badan 10 askari oo DF-ka katirsan ay Al Shabaab isku dhiibeen iyagoo hubkoodu u dhanyahay waa khasaarihii ugu xooganaa ee DF-ka gaara tan iyo markii R/wasaare loo magacaabay Cumar Cabdi Rashiid Sharmaake.